Timo gaabin gaaban oo loogu talagalay ragga, waxay ku muuqdaan sawirro dejinaya isbeddellada | Ragga Stylish
Sawirka meeleynta Carlos Rivera | | Daryeelka shaqsiyeed, Timaha
Ragga ugu badan ayaa doorbidaya timo gaagaaban. Waana samaynay, badanaa, maxaa yeelay way ka raaxo badan tahay in la ilaaliyo marka loo eego timaha dhaadheer. Dareenkaas, waxaan ka wax qabad badan nahay haweenka.
Ok hada timaha gaagaaban dhexdooda waxaa jira qaabab fara-badan iyo googoyn. Waana taas, googoyn kasta waxaan ku kala duwanaan karnaa qaabkeenna qaabeynta ama timaha. Dhammaan kuwa raacsan aaminka ah ee timaha gaaban waxaan u diyaarinay tan gaarka ah ee aan ku soo ururinayno dhammaan isbeddellada iyo qaabka jarista si gaar ah loogu talagalay timo gaaban oo gaaban ama dhexdhexaad ah.
2 Dalagyada Faransiiska
3 Dhexdhexaad dheer
5 Af gaaban
6 Pompadour iyo Toupee
7 Qeybinta timaha oo gaagaaban
8 Qaabka moodeelka
Xiirashada waa wax soo jireen ah oo aan waligeed ka baxaynin qaabka. A timo jarid fudud oo aan fahmin da 'ama qaabab. Haddii aad u xidhatid si aad u adag oo isku mid ah, ama haddii aad ku xidhato wejigiisa yar, waa timo jaris wuxuu keenayaa dabeecad badan iyo, wixii ka sarreeya, ragannimo. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso si aad ugu hayso xaalad kaamil ah ayaa ah booqo timo jaraha ama timo jaraha ugu yaraan labadii usbuucba mar. Sidee tahay a fiiri si fudud loo helo waxaa jira kuwa doorbida inay iskood isku xoqaan guriga, kiiskan markasta waa inaad sameysaa u xiir jihada ka soo horjeedka koritaanka timaha. Qoraalkan aan horey ugu daabacnay 'Hombres con Estilo' waxaan ku siineynaa dhammaan talaabooyinka si loo helo xiirista ugu fiican.
El dalagga faransiiska Waa mid ka mid ah goynta sasabashada badan ee halkaas ka jirta. Ku sifoobay qaar dhinacyo aad u gaagaaban oo ka yara duwan dherer dherer ah, oo horay u soo baxay oo baangado leh. Waxaan dhihi karnaa waa ikhtiyaarka labaad kadib markaad xiirato kuwa sharad ku leh timo aad u gaaban. Waxa badan oo aan ogayn waa in dalagga faransiiska Waa horumar ama dib-u-daabicid timaha caadiga ah ee Emperor Roman Emperor Caesar Augustus, oo ku xirnaa curlsadiisa la aqoonsan karo. Waxay ku guuleysatay 90s iyo waxyaabo kale maxaa yeelay dad badan oo caan ah sida Brian oo ka socda 'Backstreetboys' ayaa xirtay; iyo, hadda, 2016 waxay la soo noqotay xoog iyo joogitaan. By habka, cut this wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa labadaba timo toosan iyo ruxruxo labadaba, marka lagu daro, gudaheeda gudaheeda waxaan ku ciyaari karnaa dherer kala duwan oo jajab ah.
The muusigyada pop-style dheer si fiican u noqon kartaa horumar ah ee dalagga faransiiska. Goos gooskan, ah daaqadaha ayaa laga tagaa waqti dheer waana dad badan sida dhinacyada, halkii aad ku degdegi lahayd, ayaa wax yar ka hadhay. Waa gooyn in lagu sameeyo maqas, taasoo ka dhigeysa aagga dhinacyada in badan laga dejiyo iyadoo laga soo horjeedo cirif aad u cufan. Waxay sidoo kale u shaqeysaa labadaba timo toosan iyo kuwo ruxruxa. Timaha ayaa noqday mid aad moodada 90-yadii kooxo ay kamid yihiin 'Blur' maantana waxay sameysay soo laabasho xoogan sababtoo ah kala duwanaanshaheeda.
El hoostiisa Waa timo xaadirkan, daqiiqad wuxuu xaaqaa shabakadaha bulshada sida Instagram. Timo jarid oo asal ahaan lagu sameeyo farsamooyinka yaraanta ama libdhka. Goynta waxaa lagu gartaa dusha sare oo mug leh, isbarbar dhiga leh dhinacyo gaagaaban oo sii yaraanaya ka dheer ilaa gaaban, kor ilaa hoose. Goynta waxaa lagu sameyn karaa iyada oo la abuurayo isbeddel xeeladeysan oo dhererka timaha ah ama, liddi ku ah, abuurista farqi weyn oo soo jiidasho leh. Nooca noocan ah wuxuu leeyahay fursado badan oo maanta aan dhihi karno waxay noqotay ifafaale fayras ah.
Goynta cad waxaa lagu gartaa qufullo gaagaaban oo aad u baxaaya. Badanaa waxaa lagu xiraa dhinacyada aad u adag waana la sameeyaa xoogga saar suulka sare. Waa goyn aad u tiro badan inkasta oo ay aad u gaaban tahay maaddaama lagu ciyaari karo timo dhammaystir kala duwan. Waxay si fiican ugu shaqeysaa timaha kor u kaca ama cirbadaha leh, isla sidaas oo kale, waxay la ciyaareysaa xargaha jihooyinka kala duwan.
Pompadour iyo Toupee
Faan-buurku wuxuu lahaa heerkiisii ​​ugu sarreeyay sannadihii 50-meeyadii. Timaha oo lagu garto timo shanleysan sida taabasho ayaa xaaqday waqtigan iyada oo ay ugu wacan tahay ifafaalaha 'Dufan' ama Elvis caan ah. In kasta oo, waxa aanu qof kastaa ogeyn, ay tahay in magaceeda lagu leeyahay aristocrat Madame Pompadour, oo ka mid ah dadka jecel Louis XV, oo soo xirtay buunshahan kor loo qaaday iyo kuwa mugga weyn leh. Maalmahan wuxuu sameeyay soo laabasho xoogan mahadnaqa qaababka astaamaha sida David Beckham ama Bruno Mars. Farshaxanka casriga ah waxaa dib loogu cusbooneysiiyay dhinacyo aad u yaraaday oo gaagaaban, marka laga soo tago baangado aad u culus..
Qeybinta timaha oo gaagaaban
Diillinta dhinaca waa a mid kale oo ka mid ah classics-ka timaha ragga oo marna qaabka ka baxa. Xaqiiqdii, waa timo timaha soo jiitamayay tan iyo sanadihii 4aad. Weligeed ma joogsan is-raacsiga. Kala tagga dhinac waa timaha duurjoogta ah, qaab ku habboon ragga badankood waana la gashan karaa labada timo gaagaaban iyo kuwa dhaadheer labadaba. Cusbooneysiinta ugu dambeysa ee jarista ayaa ah mida calaamadeysa xariiqda qaab go'an, saameyn lagu gaaro iyadoo lagu sawirayo inta lagu gudajiro mashiinka xiirista.
Qaabka ka dhanka ah
Waxay ku guuleysatay lixdameeyadii oo ay caan ku ahaayeen qabiilka reer magaalka ah ee asal ahaan ka soo jeeda Ingiriiska. Ku mods waxay ka sameeyeen moodadan timo-jareer leh garaacis gaaban iyo mid toosan oo leh dhinacyo dhaadheer oo badhkood caan ka ah meelaha qaarkood sida dhinacyada dhinaceeda. Goynta ayaa la gashan karaa sida aan ku aragno dhaqdhaqaaq yar dhamaadka ama ku shanleysan saameyn xoog leh. Kooxo sida 'Oasis' ah ayaa horyaal u ahaa goos gooskan oo si xishood leh u bilaabmayo inuu markale noqdo mid moodada.
Goynta waxaa lagu calaamadeeyay asymmetry weyn oo ay dhinacyada isku dhegan ayaa ka soo horjeeda laadarka dhaadheer ee aadka u dheer. Waxaan u kala saari karnaa nooc ka mid ah hoostiisa, maaddaama sidoo kale lagu gaaro jumladaha ama farsamada isku dhafan. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxay noqotay mid moodda leh oo loogu mahadcelinayo fannaanka Justin Bieber, oo ku lebistay timo midabkeedu sarreeyo oo platinum ah. Maanta, waxaa jira kuwa ku calaamadeeyay xag-jirnimada goos gooskan khadadka xiiray ee dhinacyada lagu gaadhay mandiil.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timo gaaban
Ragga Timaha loo jaro dijo
Shaki la'aan, timo gaaban waa mowjadda! Aad ayey u fududahay in la sameeyo, waqti yar oo qaab ah, waxayna u muuqdaan kuwo fiican! Gooyn wanaagsan ayaa la muujiyay.
Kajawaab Timaha Ragga
Timo gaaban: waxaan ku tusineynaa sida loo helo muuqaal kasta
Zara waxay ku sharraxeysaa shaashadda iyo maro jilicsan xilli ciyaareedka soo socda ee rasmiga ah